Fantaro ny Seville April Fair | Vaovao momba ny dia
Fantaro ny Seville April Fair
Carmen Guillen | | Tanànan'ny Espana, General, Ocio, Sevilla
Raha mbola tsy nankany amin'ny Seville April Fair Lazaiko anao fa iray amin'ireo zavatra ireo tsy maintsy miaina farafahakeliny indray mandeha amin'ny fiainanao ianao. Fa maninona Ho an'ny fahafinaretana aterak'izany, ho an'ny fanakaikezan'ny olona ao aminy, amin'ny fianarana mandihy Sevillanas raha tsy mbola fantatrao ary satria andro vitsivitsy dia ialana ny zava-drehetra ary mifalifaly fotsiny ianao.
Tena mankafy an'ity fety ity ny Sevillians ary miaraka amin'ny Herinandro Masina (lasa fotsiny) dia sahy milaza aho fa izy roa ireo no zavatra mahafinaritra tokony hipetraka sy honina ao Seville.
1 Daty sy kely ny tantarany
2 Afisy sy drafitra ankapobeny an'ny foara
3 Torohevitra fototra hiaina ny foara amin'ny volana aprily
Daty sy kely ny tantarany
Tamin'ity taona ity ny Seville April Fair dia manana izany daty hanombohana ny talata 12 aprily miaraka amin'ny fitsapana jiro izay hanomboka amin'ny 00:00 ora. Manomboka eo no ahafahantsika manomboka ny foara. Jiro aman'arivony maro no mirehitra amin'ity jiro ity izay manazava ny fidirana sy ny araben'ny vala (maherin'ny 350.000). Mifarana ny alahady 17 aprily amin'ny 24:00 miaraka amin'ny fanombohana afomanga (mahazatra amin'ny ankamaroan'ny foibe sy fivahiniana masina). Ny alin'io namoronana ny jiro io dia fantatra amin'ny anarana hoe "Ny alin'ny trondro kely."
Ny Seville April Fair dia natao mba amporisiho ny Sevillians tamin'ny taona 1842. Tamin'ny faran'io taona io dia nisy rivo-doza nandao an'i Seville rava. Ny Sevillians dia tsy nandeha tamin'izany fotoana izany noho ny fifaliana maro ary tena nila fanakorontanana izy ireo mba hahafahan'izy ireo mamela alahelo be dia be (ny tanàna koa dia tao anatin'ny krizy ara-toekarena nandritra ny fotoana maro). Tamin'izany fotoana izany dia nisy mpanolotsaina roa tao amin'ny tanàna tonga tamin'ity hevitra lehibe ity: ny famerenana ny foara roa mampiavaka an'i Seville, ity tamin'ny volana aprily ary iray hafa nitranga tamin'ny volana septambra, izay efa nomen'ny lalàna tamin'ny taona 1254 avy amin'ny Mpanjaka Alfonso X El Sabio.
Ary izany no nahaterahan'ny Fetin'ny Aprily voalohany tamin'ny andro maoderina. Nankatoavin'ny filankevitry ny tanàna izany tamin'ny 18 septambra 1846 ary notokanana tamin'ny 18 aprily 1847 tao amin'ny kijana San Sebastián, miaraka amina tranoheva 19.
Toy izany ny fahombiazana nananany, tsy nitsahatra ny foara isan-taona. Raha ny marina, Seville, izay, araka ny efa nolazaintsika teo, dia tao anatin'ny krizy ara-toekarena, dia tao amin'ny Fair Fair-ny tenany izay nahitany ny vahaolana: orinasa, solomaso chamomile, hira, dihy, fifaliana sns. Tolotra manintona hisarika olona!
Ny mahazatra indrindra amin'ny foara tsy misy fisalasalana io ny trano heva maro (mihoatra ny 1.040) izay hitantsika fa samy mihinana ny tsiron'ny Sevillians sy ny mpizahatany mandray azy ny sakafo sy ny zava-pisotro (ny rebujito malaza sy ny chamomile malaza). Ny fihinanana sy fisotroana no fahafinaretana roa lehibe indrindra amin'ity foara mahazatra ity.
Afisy sy drafitra ankapobeny an'ny foara
Avy eo ianao dia afaka mahita ny fiaramanidina ankapobeny avy amin'ny Fair izay ahitanao ny trano rantsan-kazo sy ny voly fialamboly.
Atolotray anao koa ny afisy ofisialy amin'ny foara amin'ny volana aprily amin'ity taona 2016 ity.
Torohevitra fototra hiaina ny foara amin'ny volana aprily
Eny, hiaina tsara ny Fair April ary ny tsy hahadinoanao izay tena sarobidy dia mitondra andian-dahatsoratra ho anao izahay toro-hevitra fototra tokony ho tadidinao rehefa rendrika na rendrika eo anelanelan'ny sevillanas sy «trondro nendasina» ianao:
Fantaro kely ny tantarany (Efa vitanao io fisaorana anay io eh?).
Misy izany Trano fidirana maimaimpoana sy trano fisoratana anarana amin'ny fanasana. Misy tapakila fidirana 16 maimaim-poana amin'ny totaliny izay hahitanao ny toerana misy azy ireo amin'ny sarintany ankapobeny izay nomenay teo aloha.
Hay tontolo roa avahana tsara: ny foara ary ny foara fanaovana alina. Mandritra ny andro dia ahitanao ny soavalin'izy ireo tsara tarehy izay azonao andehanana manodidina ny kianja mitafo (eo izy ireo hatramin'ny 20:00 alina) ary amin'ny alina dia mihabetsaka ny mpanatrika ny tanora.
entana Kiraro ahazoana aina mandeha sy manitsaka ary tsy mampaninona azy fa maloto amin'ny loto. Ny zaridaina dia ao Albero.
Ny safidy tsara indrindra handehanana sy hividianana foara dia ny fitateram-bahoaka satria mandritra ireo daty ireo dia misy serivisy manokana. Ny fijanonana eo akaikin'ny vala dia mety ho hadalana tokoa, tsy lazaina hoe iraka "saika tsy azo atao".
Raha afaka sy maniry ianao dia tsidiho tsara ilay toerana akanjo gipsy, Fomban-drazana io. Na dia tsy afaka aza atao dia aza manahy fa afaka mandeha araka izay itiavanao azy ianao.
ny attractions any Seville, ary koa any amin'ny sisa amin'ny Andalusia, izy ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe «Gadget kely«. Ireo dia hita ao amin'ny malaza "Làlan'ny helo" (anarana nomen'izy ireo azy noho ny hamaroan'ny mozikany).
Amin'ny trano rantsan-kazo sasany dia azonao atao ny mividy ny sakafonao sy ny zava-pisotro misy anao vola fa amin'ny hafa kosa dia ilaina izany "Voucher".
La sakafo mahazatra fa tsy afaka mitsahatra manontany tena ianao dia ny omelette ary ahoana zava-pisotro ny rebujito, fifangaroana chamomile tena mamelombelona miaraka amin'ny voasarimakirana.
ny daty roa lehibe samy fiandohana sy fiafaran'ny foara izy ireo. Ny iray noho ny jiro malaza ary ny iray hafa ho an'ny afomanga.
Ary miaraka amin'izay, ny toro-hevitra farany farany: Ankafizo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » Fantaro ny Seville April Fair
Mailuu Suu sy ny fandotoana
Visual Approach na VMC (Toetran'ny toetr'andro Visual Meteorological)